Ardayda Jaamacadda Muqdisho oo u fariisatay imtixaanka semisterka 1-aad ee sanad waxbarashadeedka 2017-2018 |
Ardayda Jaamacadda Muqdisho oo u fariisatay imtixaanka semisterka 1-aad ee sanad waxbarashadeedka 2017-2018
Kumanaan ardayda Jaamacadda Muqdisho oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ufariistay imtixaankii koobaad ee simisterka koobaad ee sanad waxbarashadeedka 2017-2018.
Imtixaankan ayaa ka bilawday dhamaan 9-ka kuliyadood iyo qaybahooda oo kakooban 26 takhasus xarumaha ay jaamacadu ku leedahay magaalada muqdisho iyadoo ardayda imtixaanka u fariisatay wajiyadooda laga dheehan karayay dadaal iyo diyaar garow ku aadan imtixaanka.
Guddoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo kormeer kumaray dhamaan kuliyadaha uu imtixaanadu kasocda waxa uuna u hambalyeey ardayda jaamacadda ee imtixaanka u bilawday, wuxuuna ugu duceeyay inuu Ilaahey u fududeeyo markastana ay ilaaliyeen nidaamka udagsan Jaamacadda.
Sidoo kale wuxuu gudoomiyaha u hambalyeeyay waalidiinta, macalimiinta iyo dhamaan bulshada soomaaliyeed iyo maamulka iyo hawl wadeenada Jaamacadda Muqdisho.
Diiwaan hayaha guud ee Jaamacadda Muqdisho Dr. Maxamed Xasan Nuur oo lahadlayay warbaahinta ayaa u mahadceliyay dhamaan ardayda ufadhida imtixaanka iyo waalidka soomaaliyeed kalsoonida ay siiyeen Jaamacada Muqdisho isagoo tilmaamay in kaalinta jaamacada muqdisho ay leedahayna ee dhanka waxbarashada ay kasoo bixi doonto.
Diiwaan hayaha guud ee Jaamacadda Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay imtixaankan inuu socondoono muddo 12 cisho oo subax iyo galab ah.
“21 sano oo ay jirtay Jaamcadda Muqdisho waxay waayo aragnimo fiican uleedahay hababka nidaamka imtixaanaadka iyo qaybaha kale ee waxbarashada, Jaamacadda Muqdishana waxay u taagantahay inay soo saarto arday tayadooda waxbarasho iyo akhlaaqdooda sarayso” ayuu yiri diiwaan hayaha guud ee Jaamacadda Muqdisho Dr. Maxamed Xasan Nuur.
Dhinaca kale, Jaamacadda Muqdisho waxay bixisaa waxbarashada sare sida Master iyo PhD takhasusyo kala duwan, sidoo kale Jaamacadda Muqdisho waxay bixisaa Diploomooyin kaladuwan oo professional ah.
Jaamacadda muqdisho oo kamid ah jaamacaddaha ugu faca wayn soomaaliya ayaa waxay kamid tahay jaamacadaha ugu horeeya qaarada Afrika waxay xubin katahay 8 urur jaamacadeed oo caalami ah iyadoo ardaydii jaamacadda wax kabartay hada ay ka shaqeeyaan dhamaan hay’adaha kala duwan ee dalka qaarkoodna ay daraasadaha sare kawadaan jaamacadaha caalamka.